Blog | Sapsa
Tusaha Dugsiyada, oo ku eg Oktoobar 1deeda
Fadlan hubi inaad buuxiso foomkan si loogu daro buugga sannadlaha ah ee dugsiga. Fadlan buuxi hal foom canug walba.
Waxaan aruurinay $ 1,264 ilaa hadda! Waxaan haysannaa wax ka yar laba toddobaad si aan u gaarno yoolkeenna ah $ 5,000. Fadlan xiriirkan si ballaaran ula wadaag asxaabtaada iyo qoyskaaga. Nalalka ayaa si toos ah ugu diraya macaamiisha meel kasta oo Maraykanka ah! Click here.
Sabtidii, mutadawiciin badan ayaa u soo baxay inay kaa caawiyaan ouThank You! R nadiifinta dugsiga sanadlaha ah. Waxaan hagaajinnay geedo, nalal beeray, waraabinnay, maroojinnay oo soo qaadnay dhowr xashiish oo qashin ah! Waxaan ku faraxsanahay inaan samayno saaxiibo cusub aadna ugu hanweynahay sida ay u adag tahay carruurtu si ay uga dhigaan deyrkooda dugsiga mid xarago leh. Waxay si gaar ah ugu fiicnaayeen buuxinta iyo riixidda culeysyo badan oo mulch ah oo ku jira barrows giraangiraha si dhibcaha saxda ah ee dayrka. Wadashaqayn badan iyo dhiirigelin ayaa la soo bandhigay. Weligaa ma malayn doontid: ma rumaysan kartaa in dameer kasta la cunay? Waan awoodnaa!
Waxaa si gaar ah ugu mahadcelinaya Dina Kountoupes oo na baray dhirtu waxay ahaayeen ilaaliyeyaal kuwaas oo ahaa haramaha iyo inay nagu hanuuniyeen hawsha beero -dhaadheer ee loo baahan yahay in la qabto! Waxaan uga mahadcelineynaa dhammaan howlaha ay qabato sannadka dhexdiisa.
Soo bandhigid Ms. Walsh
Macallinkee ayaa jecel sushi iyo shabeellada Siberian -ka cad? Xubinkan shaqaaluhu wuxuu kaloo jecel yahay barashada iyo waxbaridda dhirta wuxuuna leeyahay qaar ka mid ah timaha ugu midabbada badan SAP! Iyadu waa socod -baradka xiisaha badan, knitter -ka, waxayna sugaysaa caleenta dayrta ee quruxda badan. Malo kasta? Waa Marwo Walsh, macalinka wax baara ee St. Anthony Park! Dhawaan waxaa wareystay laba ka mid ah ardaydeeda waxaadna wax badan ka baran kartaa Marwo Walsh markaad halkaan ka akhrisato wareysigooda.
Ardaygaagu ma jeclaan lahaa inuu wareysto xubin ka tirsan shaqaalaha SAP? Fadlan buuxi foomkan si aad u bilowdo!
Sahanka Qadada Dibadda
Waxaan kaaga mahadcelineynaa ka -qeybgalkaagii sahanka toddobaadkii hore. Waxaan helnay 165 jawaabood oo 136 ay taageereen qado dibadeed oo 29 aysan helin. Waxaan awoodnay inaan shaqaaleysiino 45 mutadawiciin ah si ay u shaqeeyaan isbeddellada qadada illaa Noofembar. Maamulaha Duke wuxuu go'aamiyay in xitaa iyadoo ay jirto awooddan dadka ee dheeraadka ah, qadada dibaddu waxay keenaysaa carqalado saad oo aad u fara badan oo la xiriira amniga ardayga iyo shaqaalaha iyo jadwalka si ay u noqoto mid suurtogal ah dayrtan. Waad ku mahadsan tahay kuwa u dooday qadada dibadda iyo mutadawiciintii koofiyadaha u geliyey inay caawiyaan. Waad ku mahadsan tahay, gaar ahaan, Hans Thomsen oo si degdeg ah u abaabulay mutadawiciin toddobaadkii hore haddii ay dhacdo in fikradani bilaabanto.
Tabarucayaasha Loo Baahan Yahay: Nadiifinta Dugsiga Sannadlaha ah, Sabtida, Sebtember 25, 9-11AM
Fadlan nagu soo biir markaan nadiifineyno barxadda dugsiga.Hadda waxaan haysannaa saddex mutadawiciin ah waxaana u baahannahay 22 kale.
Barxadda dugsigeennu waxay u baahan tahay xoogaa fiiro gaar ah!Ka dib dhowr xilli oo dabeecadda uga haray dib -u -habeynta dugsiga iyo Covid, waa waqtigii la isku duubi lahaa gacmaheena, la qabsan lahaa galoofyadayada beerta oo halkaas loo aadi lahaa si loo meeleeyo booska.Spider -ka, Beerta Nabadda iyo calaamadeena hore ee Como ayaa noqon doonta diiradeena ugu weyn.
Fadlan soo qaado qalabkaaga jaridda iyo gacmo -gashiga.Waxaan joogi doonnaa bannaanka iyo bulshada dhexdeeda, laakiin fadlan hays maaskaro gacmeed haddii aad u baahan tahay inaad si dhow ula shaqeyso dadka kale.Waxaan filaynaa inay jiri doonaan qashin qashin ah oo u baahan doona xoogaa caawimaad ah in taas la geeyo Xarunta Qashinka Yard qiyaastii 11-12PM.Carruurta waa lagu soo dhaweynayaa inay kaalmo u yimaadaan.Waxaan gacanta ku hayn doonaa donuts badan si aan kuugu hayno lacag aad u sarreeya!
Sidoo kale Sabtida laga bilaabo 9-11AM ee Dugsiga Hoose SAP:
Qaybinta Buugga Sannadka
Buugaagta sannadka 2020-2021 ayaa ku jira!Waxaa jira buug -sannadeed loogu talagalay arday kasta.Waxaan heli doonnaa buugaag-sannadeed si aan uga soo qaadanno 9-11AM Sabtida 25-aad ee dugsiga inta lagu jiro Nadiifinta Dugsiga Sannadlaha ah.Haddii aad seegto fursadan, waxaan kuu heli doonaa dhowr fursadood oo dheeraad ah toddobaadyada soo socda.
Lost & Found Pop-Up
Ma wax baa kaa maqan? Waxaan haysan doonaa alaabteenna Luntay & La Helay oo la heli karo si aan u dhexgalno inta lagu jiro Nadaafadda Dugsiga Sannadlaha ah laga bilaabo 9-11AM ee Sebtember 25-keeda.Kaas oo ah xusuusin weyn: fadlan ku calaamadee jaakadaha, dhididka, macawisyada, koofiyadaha, dhalooyinka biyaha, boorsooyinka dhabarka ee magaca ilmahaaga ku yaal sumad joogto ah.Waxaan ku dhammaanaa sanduuqyo aad u fara badan oo alaab luntay sanad walba waxaanan rabnaa inaan awoodno inaan kula midowno milkiilayaashooda.
Ilaalinta Caafimaadka Midba midka Kale
Mid ka mid ah xeeladaha yaraynta dhexe ee maaraynta Covid ee bulshada dugsigeena ayaa ah imtixaan joogto ah. Waxaan la galnay dhowr qoys si aan u weydiinno sida ay imtixaanka ugu darayaan jadwalka toddobaadlaha ah.
"Waxaan ku dalbanaa xirmooyinka Vault oo lacag la'aan ah xirmooyinka guriga. Waa inaad u abuurtaa astaan ​​emayl mid kasta oo carruurtaada ka mid ah, laakiin markaad samayso waa wax aad u fudud. Markaad dalbato imtixaanka (halkan waa iskuxir), waxaa si toos ah loogu soo diray gurigaaga . Markaa waxaad ku booddaa wicitaan Zoom ah oo leh dhaqtar ku fiirinaya inaad tuubada ku tufayso oo aad tijaabiso baaritaankaaga."
"We just make appointments at Walgreens. We also have BinaxNOW kits at home that I plan to use if my son shows any symptoms. We figure if our he is sick, we'd want to know asap then make plans for a confirmation test later. The BinaxNOW kits can be a little hard to get your hands on, but try CVS, Walgreens, Walmart, Sam's Club, etc."
"Toddobaadkii hore, waxaan kor u qaaday carruurtii dugsiga oo waxaan ku dhuftay gegida diyaaradaha ballamahayaga 3PM. Waxay ahaayeen ciidan! Markaa waxaan soo qaadnay xoogaa McDonalds ah oo ku sii jeeday guriga. Haye! Ugu yaraan uma baahnin inaan karsado casho!"
Fadlan hoos ka eeg (hoosta boostada baloogga) meelaha imtixaanka bilaashka ah ee Magaalooyinka Mataanaha ah. Tiy sidoo kale wuxuu toos u tagi karaa halkan si uu ballan uga sameeyo: mncovidtestingappt.as.me
Habeenimadii Talaadada ee la soo dhaafay, SAPSA waxay kulmeen si ay u ansixiyaan miisaaniyaddeenna kharashka maaliyadeed ee Q1.Sida lagu sharxay kulanka, miisaaniyaddeena sanadlaha ah ayaa la ansixiyay bishii Juun ee la soo dhaafay, laakiin caqabadaha gaarka ah ee Covid ay soo bandhigtay, waxaan ku dhaqmaynaa inaan wax ka qabanno kharashyadeenna saddexdii biloodba mar si wax looga qabto baahiyaha degdegga ah ee uu abuuray Covid.
Kharashyada caadiga ah ka sokow, SAPSA waxay oggolaatay laba kharash oo waaweyn.Midda koowaad, $ 8,000 si ay u siiso miirayaasha hawada HEPA fasallada iyaga oo aan joogin St. Anthony Park Elementary.Midda labaad, $ 1,000 ayaa la siinayaa isuduwaha mutadawacnimada ah ee u heellan mutadawiciinta waqtiga qadada ee suurtogalka ah.SAPSA waxay u doodeysay in fasallada la rogrogo si ay dibadda wax uga cunaan maalmaha marka cimiladu oggolaato, laakiin xaddidnaanta shaqaalaha ee qadada awgeed, tani waxay u baahan doontaa 15-30 joogto ah iyo mutadawiciin u heellan inay daboolaan 1 1/2 -3 saacadood oo mutadawacnimo ah toddobaadkii ilaa dhammaadkaee Oktoobar.Haddii aad xiisaynayso booskan, fadlan iimayl u dir vicepresident@sapsamn.org
Advisory Council Meeting Re-cap
Golaha La-talinta ayaa kulmay 14-kii Sebtembar si loo bilaabo sannad-dugsiyeedka 21-22.Kulanka, Dr. Duke wuxuu ku soo bandhigay macluumaad ku saabsan lambarrada diiwaangelinta iyo borotokoolka COVID.Ka -qaybgalayaashu waxay Dr. Duke u soo jeediyeen talooyin ku aaddan sida kor -u -qaadista ardayga loo hagaajin karo iyo kooxdu waxay soo saartay fikrado ilaaliya hannaanka sida ugu ammaansan oo hufan intii suurtogal ah.
Waxaan markaa ka wada hadalnay doorashooyinka Guddiga Dugsiga Saint Paul ee muhiimka ah ee soo socda bisha Nofembar waxaanan fikrado ka dhiibannay in Golaha La -talinta ay ka caawin karaan bulshada dugsiga SAP inay wax badan ka ogaadaan musharrixiinta.Waxaan rajaynaynaa inaan siinno cod -bixiyayaasha macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mowqifyada murashaxiinta dhowr arrimood oo khuseeya qoysaska degmada toddobaadyada soo socda.
Ugu dambayn, ka -qaybgalayaashu waxay kala hadleen muhiimadda daahfurnaanta iyo ka -qaybgalka qoyska ee maamulka degmada gaar ahaan go'aamada la xiriira Qorshaha Samatabbixinta Ameerika iyo Envision SPPS.Daqiiqadaha dhammaystiran ee kulanka Sebtember ayaa dhowaan laga heli doonaa bogga Golaha La -talinta.Haddii aad jeclaan lahayd in lagu daro liiska emaylka Golaha La -talinta ama wax uun ka baro, fadlan iimayl u dir advisory@sapsamn.org.
SAP Staff Spotlight
Miyaad u malaynaysaa inaad taqaanno macallimiinta fasalkayaga keebaa bisad la yidhaahdo Oscar oo u dhaqanta sida eyga oo kale?Qaar ka mid ah tilmaamaha dheeraadka ah waxaa ka mid ah u jecleysiga cuntada Itoobiya iyo buugaagta Kevin Henkes, subaxyo aamusan oo qaxwe leh iyo buug wanaagsan, safar xagaaga ee Seattle, iyo jacaylka barashada akhriska.Ma quustaa? Waa Marwo Williams, oo ka mid ah macallimiinta fasalka koowaad ee ku cusub SAP! Dhawaan ayay wareysi la yeelatay laba ka mid ah ardaydeeda waxaadna wax badan ka baran kartaa Mrs Williams adiga oo halkaan ka akhrisanaya wareysigooda.
Ardaygaagu ma jeclaan lahaa inuu wareysto xubin ka tirsan shaqaalaha SAP?Fadlan iimayl u dir Advisory@sapsamn.org si aad ugu diyaariso saxafigaaga soo koraya.
Fadlan buuxi foomkan si loogu daro tusaha dugsiga sannadkan.Soo gudbinta waxaa la filayaa Oktoobar 1st.
Fadlan u samee koonto qoyskaaga oo buuxi arjiga faa'iidooyinka arday kasta oo qoyskaaga ah.Tani waa muhiim, xitaa haddii aad diidi doonto faa'iidooyinka!Waxay ka caawisaa degmo dugsiyeedka inay go'aamiyaan baahiyaha dhabta ah ee dugsigeenna waxaanan u baahannahay in qoys walba ka jawaabo.Codsigan waxaa lagu turjumi karaa Isbaanish, Soomaali ama Hmong iyadoo la adeegsanayo hoos u dhaca bogga arjiga.
Tijaabada toddobaadlaha ah ee Covid!Mid ka mid ah xeeladaha yaraynta dhexe ee lagu maareeyo Covid-19 bulshada dugsigeena ayaa ah imtixaan joogto ah.Fadlan hoos ka fiiri goobaha imtixaanka bilaashka ah ee Magaalooyinka Mataanaha ah. https://mn.gov/covid19/assets/Find-Testing-Locations_Somali_Final_tcm1148-451773.pdf